अस्ट्रेलियासँग ५–० ले हार्यो नेपाल, तर पनि किन खुसी ?
अस्ट्रेलियासँग ५–० ले हार्यो नेपाल, तर पनि किन खुसी ?
बिहीबार २३, असोज २०७६
क्यानबेरा । अस्ट्रेलियाले नेपाललाई ५—० गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको छ । विश्वकप छनोट फुटबलको बिहीबार खेलिएको खेलमा प्रारम्भदेखि नै अष्ट्रेलियाले नेपाललाई दबाबमा राखेको थियो ।
पाँच पटक सम्म विश्वकप खेलिसकेको अष्ट्रेलिया नेपालभन्दा तुलनात्मक रुपमा बलियो टिम हो । त्यसैले अष्ट्रेलियालाई कम गोलमा समेटेकोमा नेपालले सन्तोष मानेको हो ।
खेलको सुरुदेखि नै अस्ट्रेलियाले नेपालविरुद्ध आक्रामक रणनीति अंगालेको थियो ।
अस्ट्रेलियाका लागि छैटौं मिनेट र १९ औं मिनेटमा दुई गोल जेमी म्याकलरेनले गरे । अस्ट्रेलियाका लागि तेस्रो गोल २४ औं मिनेटमा ह्यारी सटरले गरे ।
खेलको ५८ औं मिनेटमा अस्ट्रेलियाले चौंथो गोल थप्यो । अस्ट्रेलियन खेलाडी ह्यारी सटरले हेड गरेको बल बचाउन खोज्दा नेपाली डिफेन्डर दिनेश राजवंशीसँग ठोक्किएर गोल हुन पुग्यो ।
नेपाली टोलीका गोलरक्षक किरन चेम्जोङले अस्ट्रेलियन खेलाडीले प्रहार गरेको करिब एक दर्जन उत्कृष्ट प्रहारलाई विफल पारेका थिए ।
खेलको ९० औं मिनेटमा अस्ट्रेलियाका जामी म्याकलरेनले नेपाली टोलीका रक्षकहरुलाई छक्याउँदै उत्कृष्ट गोल गरेका थिए ।
करिब २५ हजार दर्शक क्षमताको जियो रंगशालामा नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको खेल हेर्न करिब १८ हजार दर्शक उपस्थित भएका थिए । दर्शकमा नेपाली टोलीका समर्थकको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्वकपका लागि नेपाली टोलीले खेलेको यो तेस्रो छनोट खेल हो । यसअघि कुवेतसँग नेपाल ७—० गोलले हारेको थियो भने चाइनिज ताइपेईलाई उसैको मैदानमा २—० गोलले हराएको थियो । उक्त खेलमा दुबै गोल अञ्जन बिष्टले गरेका थिए।
अस्ट्रेलिया फिफाको वरियताको ४४ औं र नेपाल एक सय ६१ औं स्थानमा छन् । अस्ट्रेलियाले हालसम्म पाँच पटक विश्वकप खेलिसकेको छ ।
जारी विश्वकप छनोटको एसियाली क्षेत्रअन्तर्गत समूह ‘बी’ मा हालसम्म दुई खेल खेलेको अस्ट्रेलिया अपराजित रहँदै ६ अंकसहित तालिकाको पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ । अस्ट्रेलियाले कुवेतलाई ३—० गोलले हराएको थियो । अर्को खेल चाइनिज ताइपेयी खेल्दैछ ।
यसैगरी दुई खेल खेलेको कुवेत कुवेत तीन अंकसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा झरेको छ । एक खेल खेलेको जोर्डन तीन अंकसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ । तीन खेल खेलेको नेपाल तीन अंकसहित चौथो स्थानमा छ । चाइनिज ताइपेई भने तालिकाको पाँचौं स्थानमा छ ।
कोरोनाभाइरस : इतिहासमै पहिलो पटक ओलिम्पिक्स प्रतियोगिता सारिने
महोत्तरीमा जलेर एक बालिकाको मृत्यु
भारतबाट नेपाल आएकी एक युवतीको वीर अस्पतालमा मृत्यु
सप्तरीमा सशस्त्र प्रहरीबाट निर्घात कुटिए दुई युवक
अवैध लागुऔषध सहित तीन जना पक्राउ
ओखलढुङगामा आगलागी हुँदा २० लाखको क्षति